Waxaan ka sarreeyaa Michael Jackson - South Nyangono - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo • MUSIC Waxaan ka sarreeyaa Michael Jackson - South Nyangono
Qoraaga of horyaalka moodada "waxaa mar hore bilaabay," soo laabtay la tijaabadooda cusub oo ku saabsan internetka. In warbaahinta a on CRTV, our fanaanada qaranka Nyangono South ayaa sheegay in ka khayr badan Halyeeyga reer American Pop Music Michael Jackson u noqon.
Fanaankii Cameroon oo muddo dheer la barbardhigay Michael Jackson qaabkiisa dharkiisa ayaa si cad u qiray inuu sarre u yahay Boqorka Pop Music.
Fannaanka caanka ah ayaa ka hadlay fekerkiisa marka su'aalaha la xidhiidha muuqaalkii loo heesay heesaha loo yaqaan 'American'. South Nyangono wuxuu ahaa mid xoogan oo ku saabsan jawaabtiisa "Waan ku sheegi karaa inaan ka sareeyo Michael Jackson".
War saxaafadeed ka soo baxday tan iyo markaas aysan joojin xayeysiiska.
Fiiri fiidiyowga hoose ...